Ụgha nke Mbụ: Chineke Enweghị Aha​—Ihe Mere Aha Chineke Ji Dị Mkpa
“Anyị ekwekọrịtabeghị ma ànyị kwesịrị ịkpọ Chineke aha, ma ya fọdụzie aha a ga-akpọ ya.”—Ọkachamara aha ya bụ David Cunningham kwuru ihe a n’akwụkwọ bụ́ Theological Studies.
Chineke sịrị: “Abụ m Jehova. Ọ bụ ya bụ aha m.” (Aịzaya 42:8) Aha a bụ́ Jehova bụ okwu Hibru. Ihe ọ pụtara bụ “Ọ Na-eme Ka Ọ Ghọọ.”—Jenesis 2:4.
Jehova chọrọ ka anyị na-akpọ ya aha ya. Baịbụl gwara anyị, sị: “Kpọkuonụ aha ya. Meenụ ka a mara ọrụ ya n’etiti ndị dị iche iche. Kpọsaanụ na aha ya dị elu.”—Aịzaya 12:4.
Jizọs kpọrọ aha Chineke. Mgbe Jizọs na-ekpegara Jehova ekpere, ọ sịrị ya: “Emewokwa m ka ha [ya bụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs] mara aha gị, m ga-emekwa ka a mara ya.” Gịnị mere Jizọs ji mee ka ndị na-eso ụzọ ya mara aha Chineke? Jizọs sịrị na ọ bụ “ka ịhụnanya i [ya bụ, Chineke] nwere n’ebe m nọ wee dịrị n’ime ha, mụ na ha adịkwa n’otu.”—Jọn 17:26.
IHE MERE AHA CHINEKE JI DỊ MKPA
Otu ọkà mmụta n’ihe gbasara okpukpe, onye aha ya bụ Walter Lowrie, dere n’akwụkwọ ya, sị: “Onye na-amaghị aha Chineke amaghị onye Chineke bụ. Onye ahụ enweghịkwa ike ịhụ Chineke n’anya ma ọ bụrụ na o weere Chineke ka onye na-adịghị adị.”
Otu nwoke aha ya bụ Victor na-aga chọọchị kwa izu, ma ọ na-adị ya ka ya amatabeghị onye Chineke bụ. Ọ sịrị: “Ma mgbe m mụtara na aha Chineke bụ Jehova, ọ bịara dị m ka m̀ matala Chineke ahụ m nụrụla ọtụtụ ihe gbasara ya. Ọ bịara doo m anya na Chineke dị adị, mụ na ya ghọkwara enyi.”
Ọ bụrụ na anyị na-akpọ aha Jehova, anyị na ya ga-adị ná mma. O nwere nkwa Chineke kwere “ndị na-echebara aha ya echiche.” Ọ sịrị na ya ga-enwere “ha ọmịiko, dị nnọọ ka mmadụ na-enwere nwa ya nke na-ejere ya ozi ọmịiko.” (Malakaị 3:16, 17) Chineke na-agọzikwa ndị na-akpọku aha ya. Baịbụl sịrị: “Onye ọ bụla nke na-akpọku aha Jehova ka a ga-azọpụta.”—Ndị Rom 10:13.